शेयर बजारमा लगानी गर्न यी कुरा जानि राखौं « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
शेयर बजारमा लगानी गर्न यी कुरा जानि राखौं
३ आश्विन २०७४, मंगलवार ११:५४
सामान्यतया पुँजी बजारलाई प्रभावपार्ने बिभिन्न फण्डामेन्टल तथा प्राबिधीक पक्षहरु हुन्छन । तर नेपाली पुँजी बजारलाइ प्रायगरी लगानीकर्ताहरुको मनसायले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । त्यसो त कुनैपनि समाचार वा नयाँ नीतिले लगानीकर्ताको मनसायमा पर्ने प्रभावको आधारमा नै पजी बजारमा उतारचढाव आउने गर्दछ । शेयर बजारमा खरिदकर्ता र बिक्रेता बिचको मोलमोलाईका कारण नै कुनै पनि कम्पनीको शेयरको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
जति बेला पनि शेयर बजार बढ्ने क्रममा हुन्छ त्यतिबेला धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरु पुजी बजारमा लगानी गर्न प्रवेश गर्दछन् । उनीहरु अब बजार बढ्छ रे भन्नेजस्ता होहल्लाको भरमा बजारमा प्रवेश गर्ने गर्दछन् र जस्को फलस्वरुप उनीहरुको लगानी अलिक जोखिमपूर्ण बन्न पुग्छ ।
एकैछिन अध्ययन गरौं शेयर बजारमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु :
१. संचालक तथा व्यवस्थापन
संचालक समितिको नीति र निर्णयले नै कम्पनीको भविष्य निर्धारित गर्दछ । संचालकहरुको कार्यदक्षता र कार्यप्रणालीले नै कम्पनीको सबलता र सक्षमतालाई झल्काँउदछ । संचालक समितिको गलत निर्णय होस् या सही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने असक्षम व्यवस्थापनले कम्पनीलाई दुर्गति तर्फ लैजान्छ । त्यसैले लगानी गर्नुपूर्व कुनैपनि कम्पनीको संचालक समिति र व्यवस्थापन कस्तो छ सोको राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
२. कम्पनीको पुँजी अवस्था
कुनैपनि कम्पनीको पुँजीले पनि कम्पनीको अवस्था झल्काउँदछ । प्रायः धेरैजसो कम्पनीहरुको पुजी पर्याप्त हुदैन । थोरै पुँजीबाट सुरु गरिएको संस्थामा कम्पनी संचालन गर्न र व्यापार वृद्धिमा समस्या देखा परिरहेको हुन्छ । तसर्थ लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको पुँजीको पर्याप्ततालाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ ।
३. जगेडा कोष
आकस्मिक अवस्थाको लागि भनेर हरेक कम्पनीले आफ्नो जगेडा कोष स्थापना गरेको हुन्छ । कुनै पनि गम्भीर अवस्थामा पुगेमा वा समस्या परेको बेलामा कम्पनीले यस्तो कोषमा राखेको रकम प्रयोग गर्ने गर्छन । हरेक आर्थिक बर्षको खुद मुनाफाबाट कम्पनीहरुले केहि प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गर्दछन । तसर्थ जगेडा कोष जति ठुलो र बलियो भयो त्यसता कम्पनीहरुलाई राम्रो मानिन्छ । लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दा पर्याप्त जगेडा कोष भएको कम्पनी छान्नु उत्तम हुन्छ ।
४. कम्पनीको लगानी तथा कार्यक्रमिक योजनाहरु
कम्पनीहरु आफैले पनि राम्रो प्रतिफलको निमित्त लगानी गरेका हुन्छन । त्यस्ता लगानी बापत कम्पनीको प्रतिफलको बृद्धि कस्तो भएको छ ? कम्पनीले लामो समयसम्म आफ्नो लगानी मार्फत खुद मुनाफामा वृद्धि गर्न कस्ता योजनाहरु तर्जुमा गरेको छ ? कम्पनीले लगानी गरेको क्षेत्र कतिको सुरक्षित र फलदायी छ ? त्यो बारे पनि जानकारी हुनुपर्छ ।
बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको सन्दर्भमा यस्ता संस्थाहरुले कर्जा लगानी गरेका हुन्छन । कुनै पनि बैंक वा बित्तिय संस्थाले कर्जा के को आधारमा लगानी गरेको छ ? त्यो कत्तिको शुरक्षित छ ? उक्त कर्जा लगानी सहजतापुर्वक रिकभर हुन्छ कि हुन्न ? कस्तो प्रोफाईलको प्रोजेक्ट वा व्यक्तिमा लगानी गरेको छ ? कर्जा निश्कासन बापत राखेको धरौटी कस्तो छ ? आदी जस्ता कुराहरुमा लगानीकर्ताहरु समेतले चाखपुर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ । कर्जाबाट हुने आम्दानीले सिधा खुद ब्याज आम्दानीमा असर गर्ने हुनाले यसको शेयर मुल्यमा पनि प्रभाव पर्ने हुँदा लगानीकर्ता यसमा चनाखो हुनु पर्दछ ।
५. संचालन मुनाफा
कुनैपनि कम्पनी, बैंक, बित्त वा संस्थाले ब्यापारबाट कमाएको नाफालाई नै संचालन मुनाफा भनिन्छ । संचालन मुनाफाबाट कम्पनीको कार्य कौशलता र दक्षतालाइ झल्काउँदछ । कम्पनीले जति धेरै संचालन मुनाफा कमायो त्यति नै धेरै कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ । यदि संचालन मुनाफामा गिरावट भयो भने संस्थाको ब्यापार वृद्धि गर्न र शेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल दिन समस्या पर्दछ । संचालन मुनाफा भन्दा बाहिरबाट आउने मुनाफा क्षणिक र जोखिम पुर्ण हुन्छ त्यसको कुनै भर हँुदैन । संचालन मुनाफा आफ्नो कोर कामबाट कमाउने मुनाफा हो ।
६. खुद मुनाफा
कम्पनीको एक बर्षको कमाइबाट जगेडा कोषका लागि रकम छुट्टयाएर ब्याज र कर तिरिसकेपछि आर्जन गरेको नाफालाई खुद मुनाफा भनिन्छ । सोहि मुनाफाबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई बोनस र नगद लाभांश दिने गर्छ । कम्पनीले जति धेरै खुद मुनाफा गर्यो त्यति नै धेरै आफ्ना शेयरधनीहरुलाई पनि प्रतिफल दिन सक्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले शेयरमा लगानी गर्दा कम्पनीको अघिल्ला बर्षहरुको बार्षिक खुद मुनाफाको अवस्था तथा ट्रेण्डको पनि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
६. प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस)
कम्पनीले आफ्नो खुद मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई एक शेयर बराबर केहि रुपैया प्रतिफल दिने भनेर निर्धारित गरेको रकमलाई नै प्रति शेयर आम्दानी भनिन्छ । उच्च प्रतिफल दिने कम्पनीको शेयरमा प्राय लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन । प्रतिशेयर आम्दानीलाई रुपैयामा गणना गरिन्छ । लगानीकर्ताले शेयरमा लगानी गर्दा कम्पनीको ऐतिहासिक र बर्तमान प्रतिशेयर आम्दानीको अवस्थालाई अध्ययन गरेर मात्र लगानी निर्णय लिनुपर्दछ ।
७. प्रति शेयर नेटवोर्थ
कुनै पनि कम्पनी, बैंक, बित्त वा संस्था यदी दामाशायी भयो भने कम्पनीका शेयरधनीहरुले एक कित्ता बराबर कति रुपैया पाउँछन भनि गरिने गणनालाई प्रति शेयर नेट वोर्थ भनिन्छ । प्रति शेयर नेटवर्थ जति धेरै भयो त्यति नै कम्पनी राम्रो मानिन्छ । तसर्थ लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढि भएको वा नेटवर्थको ट्रेण्ड बढ्दै गएको कम्पनी छनौट गर्नुपर्दछ ।
८. मूल्य आम्दानी अनुपात (पीइ रेसिओ)
कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गर्नु अगावै त्यस कम्पनीमा आफुले कति गुणा धेरैले पैसा लगानी गर्नु हुदैछ भन्ने कुरा मूल्य आम्दानी अनुपातले बताउँछ । यो पनि एउटा आधारभूत बिशलेषण गर्ने औजार हो । यस औजारले दुइ वा दुइ भन्दा बढी कम्पनीलाई दाजेर उचित मूल्यमा सस्तो र उत्तम प्रतिफल दिने कम्पनी रोज्न सिकाउँछ ।
उदहारणका लागि कम्पनी “क’’ र “ख’’ दुवैको मूल्य आम्दानी अनुपात र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल एउटै छ । कम्पनी “क’’ को शेयर मूल्य रु. ४०० र “ख’’ को ४५० छ भने कम्पनी “क’’ खरिद गर्नु उचित हुन्छ । किनभने ४०० रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयरबाट पनि ४५० रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयरको जति नै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भने बढि लगानी गर्नु उचित हुँदैन ।
यी माथी उल्लेख गरिएका अतिरिक्त बजार सुचनाहरु, संचार माध्यमबाट प्राप्त हुने जानकारीहरु, नीति निर्णयका तहमा भईरहेका गतिबिधीहरुको नियमित अपडेटबाट मात्र शेयर बजारमा लगानी गर्नु उत्तम हुन्छ ।
प्रकाशित : ३ आश्विन २०७४, मंगलवार ११:५४